ट्रबलशुटिंगका लागि क्रोम देवटुल प्रयोग गर्दै - Semalt प्रम्प्ट्स
Chrome DevTools त्यस्तो चीज होइन जुन प्रायः SEO पेशेवरहरूको लागि विदेशी हुन्छ। अर्कोतर्फ, अर्कोतर्फ, यो ती चीजहरू मध्ये एक हुन सक्छ जुन तपाईंले सिक्नु भएको छैन। ठीक छ, Semalt मा, हाम्रो ग्राहकको एसईओ आवश्यकताहरू पुर्‍याउनमा हाम्रो प्रक्रियाको अंश तपाइँको वेबसाइटको आवश्यकताको आवश्यक पक्षहरूमा तपाइँलाई सिकाउने हाम्रो तरिकामा निर्भर गर्दछ।
SEO को लागि क्रोम देव उपकरणहरू महत्त्वपूर्ण छ किनकि हामी यसलाई समस्या निवारणमा प्रयोग गर्दछौं। Semalt र हाम्रा ग्राहकहरु बीच सजीलो सञ्चार सक्षम गर्न, हामी तपाइँलाई यो देखाउन चाहान्छौं कि हामी कसरी यो उपकरण तपाइँको वेबसाइट मा एसईओ मुद्दाहरूको समाधान गर्न प्रयोग गर्छौं।
क्रोम देव उपकरणको साथ, हामी अन्तर्निहित एसईओ मुद्दाहरू फेला पार्न सक्दछौं वेबसाईटको क्रभिलाइटिदेखि यसका प्रदर्शनसम्म। यस लेखमा, हामी हाम्रो उपकरणहरूलाई हाम्रो ग्राहकहरूको सेवा अझ राम्रो बनाउनका लागि तीन तरिकाहरू हाइलाइट गर्दैछौं।
Chrome DevTools के हो?
पूर्णमा DevTools वा Chrome DevTools वेब विकासकर्ता सहायता उपकरणहरूको एक सेट हो जुन सीधा क्रोम ब्राउजरमा निर्माण गरिन्छ। हामी यी उपकरणहरू उडानमा पृष्ठहरू सम्पादन गर्न प्रयोग गर्दछौं र समस्याहरूको तुरुन्त निदान गर्दछौं। यसले हामीलाई हाम्रो ग्राहकहरूको लागि अझ राम्रो वेबसाइटहरू निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ, तर हामी यति छिटो गर्न सक्दछौं र सुनिश्चित गर्दछौं कि तिनीहरू पूर्ण छन्।
हामी सबै एक ठूलो डिग्री मा सहमत हुन सक्छौं कि गुगल क्रोम कुनै पनि एसईओ प्रो को शस्त्रागार मा एक सबै भन्दा महत्वपूर्ण टूलकिट हो। SEO सफ्टवेयरको बाबजुद तपाईं लेखा परीक्षा स्वचालित गर्न प्रयोग गर्नुहुन्छ वा स्तरमा एसईओ मुद्दाहरूको निदान गर्न, Chrome DevTools अवश्य हुनु पर्छ। फ्लाईमा एसईओ मुद्दाहरूको जाँच गर्नका लागि महत्वपूर्ण मार्गहरू प्रदान गर्ने यसको क्षमतालाई धन्यबाद, धेरै एसईओ पेशेवरहरू, Semalt सहित, यसलाई समय र समय प्रयोग गरेको छ।
Chrome क्रोम टूलले पेशेवरहरू र वेब विकासकर्ताहरूलाई मद्दत पुर्‍याउन सक्ने धेरै तरिकाहरूमा छलफल गर्न हामी अधिक समय खर्च गर्न सक्दछौं, तर हाम्रो ध्यान केहि अलिक बढी विशेष कुरामा हो। यहाँ हामी तपाईंसँग केहि फरक-फरक केसहरू साझेदारी गर्न चाहन्छौं जहाँ हामी Chrome DevTools मा भर परेका छौं र समस्या सुधार्नको लागि।
यहाँ तीन परिस्थितिहरू छन् जुन Chrome DevTools भएको खराब विचार हुँदैन।
जब समस्या निवारण साइट प्रदर्शन।
गुगलले कसरी तपाईंको साइट बुझ्दछ भनेर डबल-जाँच गर्न।
स्पट-चेक क्रल त्रुटिहरू।
समस्या निवारणको लागि क्रोम देवटुल सेट अप गर्दै
संभावना यो छ कि तपाईंले क्रोम देवटुल प्रयोग गर्न कहिल्यै कोशिश गर्नु भएन। ठीक छ, यसमा पहुँच गर्नु SERP को वेबसाइटमा क्लिक गर्न र निरीक्षण बटन क्लिक गर्नु जत्तिकै सरल छ। एसईओ पेशेवर को रूप मा, हामी त्यो भन्दा बढी सावधान हुनु पर्छ, तर तपाईं यो कसरी प्रयोग भएको छ भन्ने विचार छ। Semalt मा, हामी दुबै एलिमेन्ट प्लेन प्रयोग गर्दछौं, जसले हामीलाई DOM अवलोकन गर्न अनुमति दिन्छ, र CSS, जसले कन्सोल ड्रअरमा केहि अन्य विभिन्न उपकरणहरू सक्षम गर्दछ।
हामी तपाइँलाई एसईओ समस्या निवारणमा कसरी यो उपकरण प्रयोग गरिन्छ चरण चरणमा प्रक्रियामा लैजानेछौं।
सुरू गर्नका लागि तपाईले दायाँ क्लिक गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि निरीक्षण चयन गर्नुहोस्। पूर्वनिर्धारित रूपमा, तपाई एलिमेन्ट प्यानल देखा पर्नुहुनेछ, र यसले तपाईंलाई डोम र पृष्ठ निर्माणमा प्रयोग हुने शैली पानाको प्रकृतिको झलक दिन्छ।
यस दृश्यले हामीलाई डुब्नका लागि धेरै चीजहरू प्रदान गर्दछ; जे होस्, हामी कन्सोल ड्रर टुलकिटको पूरा फाइदा लिन सक्षम गर्दछौं।
डटहरूमा क्लिक गर्नुहोस् जुन सेटिंग्स आइकनको छेउमा देखा पर्दछ र तल स्क्रोल गर्नुहोस् जबसम्म हामी शो कन्सोल ड्रअर विकल्पमा आउँदैनौं। वैकल्पिक रूपमा, हामी केवल एस्केप कुञ्जीमा क्लिक गर्दछौं।
कन्सोल र एलिमेन्ट प्यानल सक्षम भएपछि, प्रयोगकर्ताहरूले कोड डोममा रेन्डर गरिएको झलक प्राप्त गर्न सक्दछन्। प्रयोगकर्ताहरूले शैलीका पानाहरू पनि देख्नेछन् जुन ब्राउजरमा कोड रंग्न प्रयोग गरिएको थियो। साथै धेरै अन्य उपकरणहरूसँग तपाईंसँग कन्सोल ड्ररबाट पहुँच छ।
पहिलो-टाइमरहरूको लागि, कन्सोल ड्ररले आफैं कन्सोल नदेखाउन सक्छ, तर तपाईंले क्रोम देवटुल प्रयोग गरे पछि कन्सोल ड्ररले कन्सोल आफैं देखाउन सुरू गर्दछ। तपाईंको कन्सोल प्यानलले तपाईंलाई लग सन्देशहरू साथै जाभास्क्रिप्ट चलाउन अनुमति दिन्छ। आज हामी त्यसमा डुबुल्की मार्दैनौं।
यसको सट्टामा, यहाँ तीन थप उपकरणहरू छन् जुन हामी हेर्नेछौं:
यी उपकरणहरू फेला पार्न, बढि उपकरणहरू छान्नुहोस् र यी तीन वस्तुहरू प्रत्येक छान्नुहोस् ताकि तिनीहरू कन्सोल ड्रअरमा ट्याबहरूको रूपमा देखा पर्नेछन्। हामीले यी तीन प्यानलहरू सक्षम गरिसकेपछि, हामी समस्या निवारण गर्न सक्दछौं।
DevTools मा प्रयोगकर्ता एजेन्ट स्विच गर्दै
स्विचिंग यूजर-एजेन्ट डिभूलहरू प्रयोग गर्ने सब भन्दा बेवास्ता तरीका हो। यो एक सरल परीक्षण हो जसले हामीलाई धेरै बिभिन्न मुद्दाहरूको पर्दाफास गर्न मद्दत पुर्‍याएको छ किनकि यसले गुगलबोटले कसरी साइटमा जानकारी सुविधाहरू हेरिरहेको र प्रसंस्करण गरिरहेको छ भनेर अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दछ।
अनुसन्धानकर्ता एसईओ पेशेवरहरूको हाम्रो टीमको लागि, देवटुलहरू एक योग्य र विश्वसनीय म्याग्निफाइ glass गिलासको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, जसले हामीलाई वेबसाईटमा मुद्दाहरूको लागि जूम गर्न अनुमति दिन्छ त्यस्ता विषयहरूलाई विकास हुनबाट रोक्न मात्र होइन तर त्यस्ता मुद्दाहरूको जड कारणहरू पनि फेला पार्न।
तपाइँ कसरी तपाइँको प्रयोगकर्ता एजेन्ट क्रोम DevTools मा स्विच गर्न सक्नुहुन्छ?
क्रोममा तपाईंको प्रयोगकर्ता-एजेन्ट स्विच गर्दा, तपाईंले आफ्नो कन्सोल ड्रअरमा नेटवर्क सर्त ट्याब प्रयोग गर्नु आवश्यक पर्दछ। यो गर्नका लागि, तपाईं स्वचालित रूपमा चयन अनचेक गर्नुहोस्, जसले तपाईंलाई गुगलबट स्मार्टफोन, बिंगबट, वा अन्य प्रयोगकर्ता एजेन्टहरूको संख्या प्रयोग गर्दै तपाईंको सामग्री कसरी डेलिभर गरिन्छ भनेर हेर्न मद्दत गर्दछ।
Google ले SERP मा अद्यावधिक शीर्षक ट्याग वा मेटा विवरण देखाउँदै छैन जहाँ एक घटनामा, त्यस्तै वेबसाइटको मालिक चिन्तित हुनेछ भन्ने कुरामा कुनै श .्का छैन। गुगलले किन बिल्कुल बिभिन्न शीर्षक ट्याग को छनौट गरेको छ वा ट्याग अपडेट गर्न असफल भयो भनेर बुझ्दै तपाईले गर्नु भएका परिवर्तनहरू कार्यान्वयन भएको सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
मोबाइल वैकल्पिक साइट को केसको लागि क्रोम DevTool प्रयोग गर्दै
यस्तै अवस्थामा, प्रयोगकर्ता एजेन्टलाई गुगलबट स्मार्टफोनमा स्विच गरेपछि, हामीले पत्ता लगायौं कि साइटले अझै गुगलबटमा वैकल्पिक मोबाइल साइट सेवा गरिरहेको छ। तर किनभने गुगलले पहिले नै मोबाइल पहिलो अनुक्रमणिकामा स्विच गरिसकेको छ, यसले मोबाइल साइटमा परिवर्तनहरू क्रमबद्ध र अनुक्रमित गर्‍यो तर डोमेनको डेस्कटप संस्करणमा गरिएको अपडेटहरू लिन असफल भयो।
तपाईं मान्न सक्नुहुन्छ कि मोबाइल साइटहरू केही अवशेषहरू हुन्, तर तिनीहरू वास्तवमै अवस्थित छन्।
अत्यधिक ईर्ष्यात्मक सर्भर सुरक्षा स्पटिंगमा Chrome DevTools प्रयोग गर्दै
त्यहाँ वेबमा खराब मनसाय भएका व्यक्तिहरू छन्। धेरै ह्याकरहरू र मालिसियस दुर्व्यवहारकर्ताहरूले ईन्टरनेटमा गुगलको बिरूद्ध गुगलको प्रयोग गर्न खोज्छन्। यस कारणका लागि, केहि सर्भरहरूले CDN हरू र अन्य होस्टिंग प्रदायकहरूले निश्चित निर्मित सुविधाहरू प्रस्ताव गर्न सक्दछन् जुन Googlebot स्पूफहरू रोक्दछ जब तिनीहरूको वास्तविक अभिप्राय स्प्याम्मी क्रोलरहरूलाई साइटमा पहुँच गर्नबाट रोक्नको लागि हो। अत्याधिक प्रयासमा, यी साइटहरूले Googlebot लाई साइटमा पहुँच गर्नबाट रोक्नको लागि अन्त गर्न सक्दछ। कहिलेकाँही, प्रयोगकर्ताहरूले सन्देशहरू देख्दछन जुन "अनधिकृत अनुरोध रोकिएको छ" भन्छ।
यदि हामीले गुगलको SERP मा त्यस्ता सन्देशहरू भेट्यौं भने, हामी तुरून्तै जान्दछौं कि ब्राउजरले मुद्दाहरू बिना नै सामग्री लोड गर्दछ।
प्रयोगकर्ता-एजेन्ट स्विच सुविधा प्रयोग गरेर, हामी देख्न सक्दछौं कि गुगलले बोट स्मार्टफोनमा प्रयोगकर्ता एजेन्ट सेट गर्ने बित्तिकै साइटले त्यो सन्देश प्रस्तुत गरिरहेको छ।
देव टूलहरूमा मुख्य वेब भित्ताहरूको निदान गर्दै
प्रदर्शन ट्याब DevTools को सबै भन्दा महत्वपूर्ण सुविधाहरु मध्ये एक हो। यो समस्या निवारण मुद्दाहरूको लागि उत्कृष्ट गेटवेको रूपमा कार्य गर्दछ जुन पृष्ठ गति र प्रदर्शनलाई प्रभाव पार्दछ। सामान्य नोटमा, DevTools ले केहि कार्यवाही जानकारी प्रस्ताव गर्न सक्दछ जब यो कोर वेब विटालहरूमा आउँदछ।
मेट्रिक्स जुन गुगलको कोर वेब भिटेल बनेको छ केही समयको लागि पृष्ठ गति र प्रदर्शन रिपोर्टको हिस्सा भएको छ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि एसईओ पेशेवरहरू यी मुद्दाहरूको कसरी पत्ता लगाउने बारेमा कुराकानी गर्ने। वेबमास्टरहरूको रूपमा, हामी खोजीको दक्षताका लागि कोर वेब भिटालहरूको महत्त्वको बारेमा अझ तीव्र रूपमा सचेत भएका छौं।
DevTools मा प्रदर्शन ट्याब प्रयोग गर्दा, हामी महत्त्वपूर्ण वेब मेट्रिक्स बुझ्नको लागि अझ राम्रो हुँदै जानको लागि एक चरण लिन्छौं।
तपाईंको HTTP हेडरहरू डबल-जाँच गर्नुहोस् र प्रयोग नगरिएको कोड समीक्षा गर्नुहोस्
के तपाईंले कहिल्यै आफ्नो SEO अडिटहरूमा नरम 4०4s को बारेमा सुन्नुभएको छ? ठिक छ, नरम 4०4s जब ब्राउजरले 40०4 पृष्ठ देखाउन सक्छ, तर तिनीहरू २०० ओके प्रतिक्रिया कोड फर्काउँछन्।
केहि केसहरूमा सामग्री ब्राउजरमा सोचे अनुसार लोड हुन सक्छ; जे होस्, HTTP प्रतिक्रिया कोड एक 4०4 वा 2०२ त्रुटि देखाउन सक्छ। यो सामान्य रूपमा गलत हुन सक्छ वा तपाईंले अपेक्षा गरेको जस्तो पनि हुन सक्दैन। जे भए पनि, यो प्रत्येक पृष्ठ र संसाधनको लागि HTTP प्रतिक्रिया कोड हेर्न मद्दत गर्दछ।
जबकि त्यहाँ अचम्मको क्रोम एक्सटेन्सनहरूको एक होस्ट हो जुन तपाइँलाई जवाफ कोडहरूको बारेमा बहुमूल्य जानकारी दिनुहुन्छ DevTools प्रयोग गरेर तपाइँलाई यस जानकारीको सीधा जाँच गर्न सक्षम गर्न सक्नुहुन्छ।
यस विन्दुमा, DevTools ले सबै व्यक्तिगत संसाधनहरू पृष्ठ कम्पाइल गर्नका लागि बोलाइएको देखाउँदछ। यसले सम्बन्धित स्थिति कोडहरू र झरना दृश्यहरू समावेश गर्दछ।
Chrome DevTools को साथ, तपाईंसँग अन्तर्निहित मुद्दाहरू फेला पार्न र सम्बोधन गर्ने क्षमता छ जुन तपाईंको वेबसाइटलाई यसको वास्तविक क्षमतामा पुग्न रोक्दछ। DevTools विशेष गरी तपाईंको टेक्निकल अडिटहरूमा उपयोगी छ। यी थप बाहेक, तपाईं पनि DevTools प्रयोग गर्दा गति आनन्द लिनुहोस्। हाम्रो वेब ब्राउजरहरू नछोडीकन, Semalt मा हाम्रो टीमले वेबसाइटलाई क्रलिंगबाट यसले कति राम्रो प्रदर्शन गर्छ भनेर देखाउन मुद्दाहरूको जाँच गर्न सशक्त महसुस गर्न सक्छ।
Semalt तपाइँलाई तपाइँको वेबसाइटमा सबै भन्दा राम्रो बाहिर ल्याउन मद्दतको लागि यहाँ छ, र हामी आशा गर्दछौं कि तपाइँ हाम्रो टोलीसँग सम्पर्कमा रहनुहुनेछ। हामी तपाइँकाे प्रतिक्रियाकाे प्रतिक्षामा हुनेछाैँ।